I-Pepephone ikunika i-megabytes ephindwe kabini kwi-fiber optics ye-29 euro | I-Androidsis
Ifayibha yePepephone ngoku ikunika iMb
UPepephone uthweswe isithsaba njengomnye wabasebenzi abadumileyo eSpain. Uluhlu lwayo olubanzi lwamaxabiso, zombini iifowuni eziphathwayo kunye ne-Intanethi ekhaya, kunye namaxabiso asezantsi zizitshixo ezibini zempumelelo. Kwaye umqhubi ngoku uzisa iindaba ezimnandi kubasebenzisi abanomdla kwi-fiber optics, ngenxa yolu tshintsho lutsha.
Kuba uPepephone uza kunika abasebenzisi kabini ii-megabytes. Ukuze babe nakho ukuhamba ngesantya esiphezulu ukusuka ekhaya benentuthuzelo epheleleyo. Esinye isizathu esibonisa impumelelo yalo mqhubi eSpain.
Olu ayilonyuselo. Kuba sijamelene notshintsho olusisigxina, umqhubi awazisa kubasebenzisi ukusukela ekuqaleni kwale nyanga. Kungenzeka ukuba abo banesivumelwano se-fiber optics sele beyiqaphele. I-megabytes eziphindwe kabini ngexabiso elifanayo.
I-Pepephone ngoku inyusa inani leemegabytes zenqanaba. Ke ngoko, uya kuba ne-200 Mb symmetrical. Oku kuthetha ukuba isantya sokulayisha kunye nesantya sokukhuphela siya kuba yi-200 Mb. Ndiyabulela koku, uya kuba nakho ukuhamba ngokukhawuleza kunokuba ubuqhuba ukuza kuthi ga ngoku.
Utshintsho olusisigxina, njengoko sikuxelele. Konke oku ngaphandle kokuguqula amaxabiso enyanga yale fiber ebonakalayo. Uya kuqhubeka nokuhlawula i-euro ezingama-29 ngenyanga. Ke uthatha ii-megs ezininzi ngaphandle kokuhlawula imali eyongezelelweyo. Ithuba elihle ukuba ubucinga ukutshintshela kumsebenzisi omtsha. I-Pepephone yenza kube lula kuwe ngoku.
Ekuphela kwento ekufuneka uyenzile ukuze ukwazi ukwenza ikhontrakthi yefayibha ebonakalayo evela kuPepephone ngenisa eli khonkco lilandelayo. Apha uya kuba nawo onke amanyathelo ekufuneka uwalandele ukufumana le nqanaba. Kwaye ke, bonwabela isantya sonxibelelwano esingcono, ngexabiso elifanelekileyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » Abasebenza ngefowuni » Ifayibha yePepephone ngoku ikunika iMb
I-Gmail ye-Android ikuvumela ukuba uhlehlise imiyalezo oyithumeleyo